शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन घर,कार्यालयबाटै विद्यालयको अनुगमन - Saptakoshionline
शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन घर,कार्यालयबाटै विद्यालयको अनुगमन
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २३, २०७५ समय: ९:११:३४
विराटनगर । मोरङको जहदा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र अनुगमन चुस्त–दुरुस्त राखि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग थालेको छ । जहदा गाउँपालिकाले प्रदेश नम्बर १ मै पहिलो पटक सफ्टवेयरको प्रयोग गरि विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमनको काम थालेको हो । गाउँपालिकाले विद्यालयहरुमा इम्पेटस् टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि. ले निर्माण गरेको एसपीआरए(स्प्रा) एकाडेमिक सफ्टवेयर जडान गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा १६ वटा विद्यालयमा सफ्टवेयर जडान गरि प्रतिस्थापन कार्यक्रम समेत गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैलाश मण्डलले समस्याको रुपमा रहेको विद्यालय अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सफ्टवेयरले नै गर्ने भएपछि विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र अनुगमनको काम निकै सजिलो हुने बताए । “विद्यालयहरुको ठूलो समस्या भनेकै व्यवस्थापन र अनुगमनको पाटो हो । त्यही काम गर्ने सफ्टवेयर नै बनेपछि धेरै सजिलो हुने भयो ।” अध्यक्ष मण्डलले भने, “शिक्षकको सबै घण्टीको हाजिरी, विद्यार्थीको हाजिरी, गाउँपालिकाबाटै अनुगमन गर्न सकिने र अभिभावकले घरमै बसेर विद्यालयको गतिविधि अनि बच्चाको पढाइ बुझ्न सक्ने भएकाले यो प्रविधि निकै प्रभावकारी हुनेछ ।” आफु पूर्व शिक्षकसमेत भएकाले विद्यालयहरुको समस्या थाहा भएको बताउँदै उनले सफ्टवेयर जडान भएपछि शिक्षकहरुले हाजिर गरेर भाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै इम्पेटस टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि.का अध्यक्ष जीवन गुरागाईंले जहदा जस्तो ग्रामिण र प्राविधिकरुपमा अफ्ठेरो ठाउँबाट सफ्टवेयर जडान सुरु गरिएको बताए । “यहाँ मोवाइलको टावरसमेत राम्ररी टिप्दैन, विद्यालयहरु समेत निकै अव्यवस्थित छन् । त्यही भएर हामीले जहदाबाटै काम सुरु गरेका हौं ।” अध्यक्ष गुरागाईंले भने, “जहाँ बढी समस्या छ, जहाँ अफ्ठेरो छ, त्य
हींबाट काम सुरु गरेर हामीले चूनौतीलाई स्विकार गरेका छौं र हामी सफल पनि भएका छौं ।” जहदासँगै मोरङको विकट पहाडी क्षेत्रको रुपमा रहेको केराबारी गाउँपालिकाको सिंहदेवीस्थित जेफालेका विद्यालयमा पनि यो सफ्टवेयर जडान गरिएको गुरागाईंले जानकारी दिए । यो प्रविधि खासमा सफ्टवेयर मात्र नभएर सफ्टवेयर भन्दा बृहत्, एनालाइसिस रिसोर्स प्रोग्रामिङ (इआरपी)’ सिस्टम भएको उनको भनाइ छ । इम्पेटस टेक्नोलोजि नेपाल प्रा. लि., प्रदेश नम्बर १ का डाइरेक्टर रेवती निरौलाका अनुसार एसपीआरए(स्प्रा) एकाडेमिक सिस्टमको जडानपछि कुनै पनि अभिभावकले घरमै बसेर आफ्नो बच्चा विद्यालय पुग्यो–पुगेन, हाजिर तथा होमवर्क ग¥यो–गरेन भनेर थाहा पाउन सक्ने तथा घरमै बसेर शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव समेत दिन सक्नेछन् । यस्तै शिक्षकले होमवर्क चेक गरेको र हाजिर गरेको वा नगरेको समेत थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसैगरि कुनै पनि विद्यार्थीको हरेक दिनको रिजल्ट तयार हुने भएकाले अभिभावकले चाहेको अवस्थामा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट डाटा प्रयोग गरेर हेर्न सक्नेछन् । एसपीआरए(स्प्रा) एकाडेमिक सिस्टमले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था, भाषागत शुद्धता, अनुशासन, सिकाई क्षमता, अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुची तथा सहभागिता, बहुप्रतिभा तथा परीक्षाको प्राप्ताङ्क सहितलाई विश्लेषण गरेर रिजल्ट तयार पार्ने डाइरेक्टर निरौलाले जानकारी दिए । कुनै बच्चाको रुची के छ ? अनि ऊ कुन बाटोमा गइरहेको छ ? उसलाई भविश्यमा के पढाउँदा ठीक हुन्छ भन्नेसम्मको विश्लेषण गरेर ग्रेडिङ सिस्टममा समेत रिजल्ट तयार हुने उनको भनाइ छ । यो प्रविधिबाट जनप्रतिनिधिले समेत आफ्नो कार्यालयमै बसेर नगर तथा गाउँपालिका भरिका विद्यार्थीको उपस्थिति, शिक्षकको उपस्थिति लगायतका कुरा अनुगमन गर्न सक्ने निरौलाले जानकारी दिए । यो सफ्टवेयर जडान गरेपछि विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर विभिन्न सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने निरौलाको दाबी छ । इम्पेटस टेक्नोलोजी नेपालले अहिले ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरि विद्यालयहरुमा काम गरिरहेको कम्पनीका सीइओ रविन कोइरालाले जानकारी दिए । नीजि विद्यालयबाट निकै माग भइ आएपनि तत्काल यो सफ्टवेयर नीजि विद्यालयलाई नदिएर सरकारी विद्यालयमा मात्र जडान गर्ने कम्पनीको नीति रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले विद्यालयहरुमा आफ्नै सर्वर विकास गरेर काम गर्ने भएकाले यसप्रकारको प्रविधि नेपालमा यो नै एकमात्र भएको सीइओ कोइराला बताउँछन् ।